कोरिया अघि सर्यो भरतपुरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न - Everest Dainik - News from Nepal
कोरिया अघि सर्यो भरतपुरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको गुरुयोजना कोरियन संस्थाले तयार गर्ने सहमति भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका कार्यालयमा महानगर र कोरियन संस्था सुडोनोनबीच समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको हो ।
एमओयूमा महानगरका तर्फबाट मेयर रेणु दाहाल र सुडोनोनका तर्फका संस्थाका प्रमुख जो उनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कोरियन कम्पनीले एक वर्षभित्र भरतपुर महानगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी विस्तृत योजना तयार गर्ने छ । त्यसको लागत ७ करोड लाग्ने अनुमान छ । उक्त खर्च सोही संस्थाले व्यहार्ने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए ।
समझदारी पत्रमा पाँच बुँदा समेटिएका छन् । सम्झौताअनुसार सो कम्पनीले महानगरका हरेक वडाबाट निस्कने सिजन अनुसारको फोहरको प्रकृति, भोल्युम्का बारेमा अध्ययन गरेर योजना बनाउने छ ।
याे पनि पढ्नुस उद्योग संघको दुईवर्षे कार्ययोजना तयार
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ११ को आँपटारीमा रहेको १६ विगाहा जमिनमा फोहर प्रसोधन तथा व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने लक्ष्य महानगरको छ । यो क्षेत्रमा जग्गा दिएवापत महानगरले वनलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप माडी नगरपालिकाको अयोध्यापूरीमा जग्गा खरीद गरी वृक्षारोपण गरेको छ ।
२ देखि ३ वर्ष भित्रमा यो प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएइएको महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले दावी गरिन् ।
फोहर व्यवस्थापनको योजनासहित सवै आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन यहि कम्पनीले गर्ने महानगरकी मेयर रेनु दाहालले जानकारी दिइन् ।
‘यो उनीहरुको नमूना प्रोजेक्टका रूपमा यहाँ चल्ने छ, काठमाण्डौंलाई समेत छाडेर यहाँ आएका छन् । महानगरको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं,’ मेयर दाहालले भनिन्, ‘यो प्रोजेक्टले भरतपुर महानगरको मात्रै नभइ चितवन जिल्ला र गैंडाकोट नगरपालिका क्षेत्रको फोहरको पनि व्यवस्थापन गर्न सहज हुने छ ।’
कर्पोरेशनका अध्यक्ष वनले हाल सो संस्थाले विभिन्न देशका दुई करोड ५० लाख जनसंख्याको फोहर व्यवस्थापन गरिरहेको बताए ।
अध्ययनपछि फोहोर व्यवस्थापनका लागि कोरियाली सरकारले सहयोग गर्न सक्ने उनको विश्वास छ । प्रोजेक्टका लागि कति खर्च लाग्छ ? भन्ने बारेमा गुरुयोजना निर्माणपछि मात्रैं पत्तो लाग्ने महानगरका वातावरण शाखाका इन्जिनियर विराट घिमिरेले बताए । यसअघि सो संस्थासँग सन् २०१८ को जनवरी र मे मा छलफलपछि बिहीबार सम्झौता भएको हो ।
याे पनि पढ्नुस चितवनका २ निजी मेडिकलले पाए ‘कलेजो प्रत्यारोपण’ लाइसेन्स
भरतपुर महानगरपालिकामा दैनिक ६५ टन फोहर संकलन हुने गर्दछ । निजी क्षेत्र र महानगरले त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । महानगरपालिकाको वडा नं १ देखि ५ र ७ देखि १२ सम्म निजी क्षेत्रले र बाँकी सबै क्षेत्रको फोहोर महानगरपालिकाले संकलन गर्दै आएको छ ।
महानगरमा २९ वडा छन् । फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरले वार्षिक उक करोड १५ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ । हाल महानगरपालिका-३ स्थित नारायणी नदी किनारमा फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।